Shiinaha Dome nooca warshad lagu koriyo iyo alaableyda | Aixiang
Qaab-dhismeedka Filimka 'Gothic Shape Greenhouse'
Gothic Qaab Glass Gare
Greenlo Style Muraayad Greenhouse
Xarunta soo dejiso
Booqo Warshad Online ah
Madadaalo / Dayactir Fudud Greenhouse - Plasti ...
Aqalka dhirta lagu koriyo nooca Gothic
Nooca qubbada lagu koriyo
Gothic glass-Po oo lagu daro aqalka dhirta lagu koriyo
Nooca aqalka dhirta lagu koriyo waa nooca loo yaqaan 'tunnel' oo loo yaqaan 'tunnel', waa nooca ugu isticmaalka badan.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa digaagga: doofaarka, digaagga iyo duck, iwm.
Qaab-dhismeedku waa waarayaa wuxuuna socon karaa ugu yaraan 7 sano ugu yaraan, waxaan qaadannaa tiknoolajiyadda aadka u sarreysa, si loo hubiyo in maaddadu ay hor istaagi karto dabaysha iyo roobka.
Hal aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'tunan tunnel tunnel' waa mid si aad ah loo isticmaalo. Way fududahay in la rakibo qiimaha waa ka raqiisan yahay aqalka dhirta lagu koriyo ee nooc kale ah, sidaa darteed waa mid caan ka ah adduunka oo dhan, marka la rakibo aqalka dhirta lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'tunnel sponhouse greenhouse' waxaa jira qeyb ka mid ah 30cm-50cm Waxaan leenahay seddex nooc oo noocan ah aqalka dhirta lagu koriyo, Dome, Gothic iyo Saw-tooth. Nidaamyada asal ahaan ugu muhiimsan waa qaab dhismeedka aqalka dhirta lagu koriyo, hawo qaadashada aqalka dhirta lagu koriyo iyo daboolida.Waxay ku habboon tahay beero yar yar.
Waxaa jira 1m, 1.5m, 2m farqiga udhaxeeya
Codsiga ugu weyni waa khudaarta, ubaxa iyo miraha.
Noocan ah aqalka dhirta lagu koriyo ， badiyaa waa cabir yar. Ballaca waxaan sameyn karnaa 6 m-12 m, dhererka waa la habeeyay, waxaan u qaabeyn karnaa sida aad u baahan tahay. Dhererka heerka caadiga ah ee aqalkaan koriinku waa 1.8 m, waana sidoo kale waxaa loo qaabeyn karaa sidii codsigaaga.
Waxyaabaha jir-dhiska aqalka dhirta lagu koriyo iyo cabbirka maaddadu waxay kuxirantahay cimilada deegaankaaga.Waxaa jira seddex nooc oo wax ah: bir bir ah, birta kululeeyaha kulul;
Waxa aan badanaa u isticmaalnay daboolida noocan oo kale ah waa filim caag ah, filimka PO iyo filimka PE. Waxaan u dooran karnaa filimka balaastigga ah sida aad u baahan tahay, laakiin waxaan ku sameynaa 150 filim caag yar oo codsi la'aan ah. Labadooduba waxay leeyihiin faa'iido ee
Ins Kuleylka kuleylka,
Intens Xoog sare,
T gudbinta iftiinka sare,
♦ kor u qaada sawir-qaadista,
Resistance caabbinta gabowga,
Resistance caabbinta sunta cayayaanka.
♦ Si fudud loo rakibo
Cost Qiimo jaban
Production Wax soo saar dhaqso ah
Pipes Tuubooyinka birta ah waxay ku jiraan xirmooyin
♦ Filimka waxaa ku jira boorsooyin
Accessories Qalabka kale ee yar-yar waxay ku jiraan sanduuqyada
House aqalka dhirta lagu koriyo oo dhan waxaa lagu buuxiyey kiis alwaax ah.
Hore: Sawirka-ilkaha Greenhouse
Xiga: Aqalka dhirta lagu koriyo nooca Gothic
Glass Qubbad Greenhouse
Muraayadda Geode ee loo yaqaan 'Gome Greenhouse'
Polycarbonate Qubbad Greenhouse
Koriyo nooca Saw-ilig
Madoobaadka / Neefsashada Greenhouse - P ...
Madoobaadka / Neefsashada Nalalka Greenhouse - V ...
Cinwaanka: NO.879 Wadada Ganghua, aagga woqooyi ee Dekedda Warshadaha, Degmada Pidu, 611743, Chengdu, Gobolka Sichuan, Shiinaha
Telefoon: +86 18782297674
Taageero khadka tooska ah